စားဖိုမှူးများ ပေါင်းစည်းပါ။ – ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းပဟေဋ္ဌိများ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
စားဖိုမှူးများ ပေါင်းစည်းပါ။ – ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းပဟေဋ္ဌိများ&Hack
အားဖြင့် အက်မင် | ဇန်နဝါရီလ 15, 2022
Chef Merge သည် အိမ်ကြီးများကို အလှဆင်နိုင်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစည်းနိုင်သည့် အပန်းဖြေပျော်စရာ ပဟေဋ္ဌိဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. လယ်ကွင်းထဲ လျှောက်သွားသလိုပဲ။, ဤပျော်စရာကောင်းသောပေါင်းစပ်ဂိမ်းတွင်, အသီးအရွက်တွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ & သစ်သီးများ, နေရာတိုင်းတွင် သီးနှံများ. နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။, ဆွဲယူပါ။ & တန်ဖိုးများဖန်တီးရန် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစည်းပါ။!
သင်၏ အထူးအိမ်နီးနားချင်းများနှင့် ပေါင်းစည်းထားသော အရာများကို အရောင်းအဝယ်လုပ်ပါ။, အိမ်ကြီးအလှဆင်ရန်အတွက် ဒင်္ဂါးများနှင့် စိန်များရရှိရန်! ကော်ဇော၏ပုံစံ, အလင်း၏ပုံသဏ္ဍာန်, ကုလားထိုင်များ၏စတိုင် & စားပွဲ…..အားလုံးက မင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။! ဒီဇိုင်းဆွဲရန် သင့်စိတ်ကူးများကို သင်သဘောပေါက်နိုင်သည်။, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအလှဆင်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။ – ဖန်စီပရိဘောဂဝယ်ပါ။, အခင်း, Chef Merge တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးကို ဖန်တီးရန် နောက်ခံပုံများ!
1. ၎င်းတို့ပေါ်တွင် မိုးကြိုးအမှတ်အသား⚡ ပါရှိသည့် သေတ္တာများကို တို့ပါ။, ပေါင်းစည်းရန်အတွက် ပစ္စည်းအသစ်များရရှိရန်
2. တူညီသောအရာများကို ပေါင်းစည်းရန် အတူတူဆွဲယူပါ။
3. ဂိမ်းဘုတ်၏ထိပ်တွင် သင့်အိမ်နီးချင်းများ လိုချင်သောအရာကို ကြည့်ပါ။, ထိုအရာများကို ပေါင်းစည်းပါ။, အံ့အားသင့်စရာဆုလာဘ်များရရှိရန် သင့်ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချပါ။
4. သင်ရရှိသောဒင်္ဂါးပြားများကို အသုံးပြု၍ အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အပြီးသတ်ပါ။, ကိုယ့်အတွက် အထူးစံအိမ်တစ်ခုလုပ်ပါ။
1. အဆင်ပြေတယ်။ & နူးညံ့သောအရောင်ဒီဇိုင်း, အပန်းဖြေနောက်ခံဂီတ, သက်တောင့်သက်သာရှိပါစေ။.
2. ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း & ချစ်စရာ စိုက်ပျိုးရေး အစိတ်အပိုင်းများ သည် သင့်အား ဖိအားနည်းပြီး ပိုပျော်စရာကောင်းသည့် အထူးဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာပါသည်။.
3. အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။, အဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် အင်အားမရှိပါ။. လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ကို လိုက်လုပ်နိုင်သည်။.
4. နောက်ထပ် အိမ်ရာများ ဖန်တီးရန်. စံအိမ်များကို စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသည်။!
5. သင်၏လက်ချောင်းများကို လေ့ကျင့်ပြီး ပေါင်းစပ်ပဟေဠိဂိမ်းတွင် သင်၏စွမ်းရည်နှင့် ဗျူဟာများကို စမ်းသပ်ပါ။.
6. စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စုဆောင်းပြီး ၎င်းတို့အတွက် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။. အယ်လ်ဘမ်၏ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံကို ပြသခြင်းဖြင့် သင်၏ရိတ်သိမ်းမှုကို အလွယ်တကူပြသနိုင်သည်။.
သင်ဟာ ပေါင်းစည်း/ပွဲကစားတဲ့ ဂိမ်းကို ရူးသွပ်သူတစ်ယောက်ပါ။, Chef Merge ကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။! ကောက်ယူပြီး စီမံခန့်ခွဲရန် လွယ်ကူသည်။. သင်ရွှေ့လိုက်သောအခါတွင် ဒြပ်စင်အသစ်များစွာ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။, ပေါင်းစပ်ဂိမ်းတစ်ခု၏ဖျော်ဖြေရေးအပြင်, သေချာပေါက် မင်းကို ကျေနပ်လိမ့်မယ်!
Chef Merge ကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ပိုမိုလှပသော အိမ်ကြီးများကို ပုံမှန်ဖြေရှင်းရန် ပိုမိုပြင်းထန်သော ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။! အပ်ဒိတ်များကို စောင့်မျှော်လျက် ကျွန်ုပ်တို့အား သုံးသပ်ချက်ချပါ။!
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Chef, ပျော်စရာ, မီးခြစ်, ပေါင်းစည်းပါ, ပဟေ.ိ
← ဘိန်းကစားခြင်း။: လှည့်စားမှုများကို ဖျောက်ပြီး ရှာပါ။&Hack Tyrant Tycoon: Wealthy Empire – လှိုင်သာယာ&Hack →
Miracle Pop Blast – လှိုင်သာယာ&Hack